Group Of Metro အိန္ဒိယရှိအဆိပ်အတောက်များထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ
Metro Group နောက်ဆုံး nanoTechnology ကို အသုံးပြု. nano vitrified tile များကိုထုတ်လုပ်သည့် Premiumed Vitazed Tiles နှင့် Nano Tiles ထုတ်လုပ်သူမှထုတ်လုပ်သူမှထုတ်လုပ်သူ.ထုတ်လုပ်ထားသောကြွေပြားတိုင်းသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောစစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားပြီးအကြမ်းဖက်ပြီးသဘာဝကျန်းမာရေးနှင့်အဆင်ပြေသော nano vitrified tiles များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် . Nano Vitrified TILES ကိုဒီဂျစ်တယ်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောကြွေပြားများပေါ်တွင်အရည်ရွှမ်းသောအရည်ရွှမ်းမှုများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်. ထို့နောက်၎င်းတို့အားကွက်လပ်များ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ micro သို့မဟုတ် nanopores များဖြင့်ဖြည့်စွက်ပြီးချောမွေ့စေသည်. ၎င်းတို့သည်သမားရိုးကျကြွေထည်များထံမှ၎င်းတို့တွင်ရေထွက်ခံနိုင်ရည်နှင့်ဖုန်မှုန့်များဖြစ်စေနိုင်သော Nanroparticles အလွှာရှိသည့်အနေဖြင့်၎င်းတို့တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြွေထည်များထံမှတိုးမြှင့်ကြသည်. အဆိုပါ vitrified ကြွေပြားများသည်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနိမ့်ရန်လိုအပ်သည်. ဤရွေ့ကားများကို VITRIFIRIFIR TILES, NONATIAL VITRIFIRIFIRE VITRIFIRIFIRE TILES, glazed vitrified vitrified vitrified tile များ (GVT TILES) သို့မဟုတ် GVT TILES (GVT TILES),.
ဒစ်ဂျစ်တယ် vitrified tiles များကိုအလွန်အကောင်းဆုံးနည်းစနစ်များထဲမှတစ်ခုကို အသုံးပြု. အလွန်ကောင်းသောနည်းစနစ်များထဲမှတစ်ခု အသုံးပြု. ဒစ်ဂျစ်တယ်အဆိပ်အတောက်ပြားများ,. ကြွေထည်သို့မဟုတ်ဒီဂျစ်တယ် vitrified tiles များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ရေစုပ်ယူမှုပမာဏသိသိသာသာနိမ့်ကျသည်။ ၎င်းသည် 0.5% ထက်လျော့နည်းသည်။. ဒီဂျစ်တယ် vitrified tiles များသည် silica ၏ coilea ၏ coilea ကိုအုတ်မြစ်များပေါ်တွင်ပါ0င်သည့်အခါတွင်ပါ0င်သည့်အုတ်မြစ်များပေါ်တွင်ဖုံးအုပ်ထားသည့်အခါထုတ်လုပ်သည်. အဆိုပါနည်းလမ်းသည် tile ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ micro သို့မဟုတ် nanopores များကို plug လုပ်သည်, ၎င်းသည်၎င်းကိုပင်ချောမွေ့စေသည်။ vitrified tiles များကိုဖုံးအုပ်ထားသည့် nanomaterial ကိုဖုံးကွယ်ပြီးနောက်ဤအုပ်ကြွပ်များကိုဒစ်ဂျစ်တယ် vitrified tile များဟုလူသိများသည်.
800 x 1600 မီလီမီတာဒစ်ဂျစ်တယ် vitrified ကြွေပြား
800 x 800 မီလီမီတာမီလီမီတာဒစ်ဂျစ်တယ် vitrified ကြွေပြား
600 x 1200 မီလီမီတာမီလီမီတာဒစ်ဂျစ်တယ် vitrified ကြွေပြား
600 x 600 MM Glazed vitrified tiledes (GVT TILES)
600 x 300 MM Glazed vitrified tiledes (GVT TILES / PGVT TILES)
နှစ်ဆတရားစွဲဆိုထားသောအဆိပ်အတောက်ပြားများသည်အုတ်တန်းနှစ်ခုအလွှာနှစ်ခုရှိသောအဆိပ်အတောက်ပြားအမျိုးအစားများဖြစ်သည် .ပထမသို့မဟုတ်အလွှာ၏အထက်အလွှာသည်အရောင်အသွေးစုံလင်သောအရောင်များသို့မဟုတ်အရောင်နှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုဖောင်းပွပေးသော hydraulic စာနယ်ဇင်းစက်မှတဆင့်ဖိအားပေးသည် . 3mm မှ3မီလီမီတာမှ4မီလီမီတာရှိသောအခြားကြွေပြားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နှစ်ဆတရားစွဲဆိုထားသော vitrified tile များရှိသည်. နှစ်ဆတရားစွဲဆိုထားသောပိုးမွှားများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖောင်းကြွခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်အနုစိတ်ဒီဇိုင်းများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများပုံနှိပ်ခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ. သူတို့ဟာ0ံပုလွေခံနိုင်ရည်ရှိသောပခုံးမျက်နှာပြင်များနှင့်ကောင်းချီးပေးသော်လည်းမိုးသည်းထန်စွာယာဉ်အသွားအလာဒေသများအတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်ကိုက်ညီစေသည်.
ခန္ဓာကိုယ်အပြည့်အဝအပြည့်အဝ vitrified ကြွေပြားများသည် tile တစ်လျှောက်လုံးသေံခြယ်ပစ္စည်းနှင့် texture ရှိသည်. ဤသည်အပြည့်အဝခန္ဓာကိုယ်အပြည့်အဝ vitrified tiles ချစ်ပ်များချစ်ပ်ချစ်ပ်ချစ်ပ်ချစ်ပ်ချစ်ပ်ချစ်ပ်ချစ်ပ်ချစ်ပ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး,.
Glazed vitrified tiledes (GVT TILES) ကိုဖုံးအုပ်ထားသည့် nanomaterial ကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်အထင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်. Matt Colecelain Glaze Glaze တံတိုင်း (သို့) glazed vitrified tiles (GVT) ကို GVT TILES ဟုလူသိများသည်. သူတို့ကဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်ခြင်းနည်းပညာမှတစ်ဆင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောပေါ်ထွက်လာကြွေပြားများဖြစ်ကြသည်။ Metro Group သည် Vitrified TILES ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး Glazed vitfied tiledes များ၏မျက်နှာပြင်နှင့်မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများ (GVT TILES) ၏ကျယ်ပြန့်သောအရောင်,. ပွတ်သွပ်နေသောကြွေထည်များသို့မဟုတ်ပွတ်တောက်ပသော glazed vitrified vitrified tile များကို (PGVT) ကို PGVT TILES ဟုလူသိများသည်. ဤကြွေပြားများသည် glazed vitzified tiles (GVT Tiles) နှင့်ဆင်တူသည်။. ၎င်းတို့အားယေဘုယျအားဖြင့်ဘန်ဂလိုများ, တိုက်ခန်းများ, အိမ်များနှင့်စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများနှင့်စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများကဲ့သို့သောလူနေအိမ်နေရာများတွင် vitriped ည့်သည်ပြားများအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်.
ကျနော်တို့က ဦး ဆောင်ဒစ်ဂျစ်တယ် glazed vitrified ကြွေပြားထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒစ်ဂျစ်တယ် Vitrified Tilets ထုတ်ကုန်များကိုအနက်ရောင်, အဖြူ, မီးခိုးရောင်, အစိမ်းရောင်, အနီရောင်,.